Kusuka kwesokunxele: UDokotela Yougasphree Naidoo nososayensi ovakashile uDokotela Samia Ibrahim
UDokotela Yougasphree Naidoo ofundisa esikoleni se Biological and Conservation Sciences esikhungweni sase Westville uzobe esebenzisana no Mphathi wase Botany e Suez Canal University e- Egypt uDokotela Samia Ibrahim. Lenhlanganiso yalabodokotela bobabili ixhaswe ngabakwa National Research Foundation (NRF) ngaphansi kwesikhwama sokushintshisana ngolwazi i- Knowledge Interchange Collaboration eyayixhase uNaidoo.
U-Ibrahim usenze ucwaningo oluningi ngaphakathi ezweni lakhe nangaphandle kanti imiphumela yocwaningo lakhe lwethulwa emihlanganenwi ababanayo yososayensi. Usebenze futhi kakhulu nabafundi base UKZN nalabo abenza ucwaningo khona esikoleni se Biological and Conservation Sciences.
U-Ibrahim usebenze nabanye abacwaningi abaningi balapha enyuvesi ngezindlela ezamukelelike zokuthola u-oyela otholakala kulezizitshalo zokwelapha. U-oyela otholakala kulezizitshalo ubaluleke kakhulu ngenxa yomthelela wawo ekulapheni nangokwemali okuyifakayo ekukhuliseni umnotho. Imiphumela yalolucwaningo abazolenza eUKZN luzonikezwa abanye ososayensi. Imiphumela izochaza kabanzi ukuthi lezizitshalo zizosetshenziswa kuphi noma kanjani.
Izwe lase Ningizimu Africa lidume kakhulu ngokuba nezinhlobo zezitshalo ezingaphezu kwa 22 000 ezahlukene zokulapha futhi lingamanye lamazwe amahlanu elinezitshalo eziningi emhlabeni. Abantu abaningi eNingizimu Africa bathembele kuzona izitshalo zendalo ukulapha izifo.